Monday January 20, 2020 - 17:34:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo maanta xaafado katirsan magaalada Muqdisho ku dhaxmaray ciidamo katirsan dowladda Federaalka iyo dad shacab ah.
Dagaalka oo ahaa mid culus layskuna adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan ayaa ka dhacay xaafado katirsan degmooyinka Shangaani iyo Cabdi Casiis ee magaalada Muqdisho.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaalku uu ka dhax qarxay ciidamo katirsan Nabad sugidda dowladda iyo dadka deegaanka kadib markii ciidamo watay gaadiid dagaal ay isku dayeen in ay qoysas danyar ah si qasab ah uga saaraan guryo kuyaal degmada Shangaani.
Ugu yaraan sedax qof oo laba kamida ay ahaayeen ciidamo katirsan dowladda ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dagaalka oo markii dambe ku fiday dhanka degmada Cabdi Casiis.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in ciidamada Nabad sugidda ay weerareen guryo qadiimo ah oo kuyaal hareeraha Fiisha Taraafiko halkaas oo ay deganaayeen qoysas shacab ah kadibna waxaa ka dhiidhiyay dadka deegaanka oo markii dambe hubka uqaatay difaacidda dhulkooda.
Daryanka rasaasta iyo madaafiicdii laysku weydaarsanayay dagaalka ayaa laga maqlayay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir, illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin dowladda Federaalka oo ku saabsan dagaalkii maanta oo ahaa mid salka ku haya murun dhuleed.